FANABEAZANA FOTOTRA – Fankalazana ny faha 80 taonan’ny EPP Antanimbarinandriana - Ministère de l'Education Nationale
FANABEAZANA FOTOTRA – Fankalazana ny faha 80 taonan’ny EPP Antanimbarinandriana
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany maraina 27 Aprily 2016 ny fanombohana ny fankalazana ny jobily faha 80 taonan’ny EPP Antanimbarinandriana.
Tonga nanatrika ny lanonana teny an-toerana ireo tomponandraikim-panjakana eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ka nisolo tena ny ministra tamin’izany ny tale jeneralin’ny fanabezam-pirenena Andriamatoa Andriamampandry Todisoa, tazana teny ihany koa ny filoha lefitry ny Antenimierampirenena sady solombavambahoaka voafidy tao amin’ny boriborintany voalohany, ary reny mpiahy izao faha 80 taona izao ny Maitre Razafimanantsoa Hanitra.
Nisy ny fandraisampitenana isan-kazarazany tamin’izany ka anisan’ny nandray fitenenana ny tale’ny EPP Antanimbarinandriana Ramatoa Adorson Lantomalala.Nambarany fa niezaka ny sekoly amin’ny fampandrosoana ny fanabeazana, noho izany dia namoaka olombanona maro izay mitana andraikitra ambony eto amin’ny firenena ny EPP toa ny reny mpiahy ny Maitre Razafimanantsoa Hanitra.Ny tsangambaton’ny faha 80 taona hoy izy dia ny fanatsarana ny efi-trano fianarana rehetra. Nisy ihany koa ny fangatahany fanampiana taminy rehetra amin’ny ezaka fanatsarana ny sekoly. Tsiahivina fa tamin’ny 27 Aprily 1936 no niorina ny Epp Antanimbarinandriana ka école des enfants Métis no niantsoana azy. Niova ho ecole Européennes Square Poincaré taty aoriana ary lasa ecole de l’education de base Antanimbarinandriana ny taona 1977. Tale 13 no efa nifandimby tao ka andriamatoa Douvier no tale voalohany tamin’ny taona 1950 ka hatramin’ny 1952 .
Ny Tale Jeneralin’ny ministeran’ny fanabezampirenena Andriamampandry Todisoa kosa dia nanambara fa fifaliana ho an’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ny miarahaba anareo eto amin’ny EPP Antanimbarinandriana amin’izao faha 80 taona izao.
Be dia be hoy izy ny ezaka vita ary maro ny tsy vita . Noho izany dia avy hatrany izy dia namaly ny hetahetan’ny Talen’ny EPP ka nanome boky ho an’ny sekoly, dabilio miisa diman-jato. Be dia be ny fanatsarana ny rafim-pampianarana hoy hatrany izy ka anisan’izany ny politikam-pirenena ho an’ny fampianarana maharitra dimy taona, mitohy ny fanofanana ny mpampianatra hanatsaran ny kalitaon’ny fanabeazana. Tsy misy atahorana ihany koa ny fanadinam-panjakana rehetra fa efa tomombana avkoa ny fanomanana rehetra ho amin’izany. Vonona hifampidinika amin’ny sendikan’nny mpampianatra Fram Anefa izya mandrahona hiitokona ny ministera.
Ny filoha lefitry ny Antenimierampirenana ny Maitre Hanitra dia naneho ny hafaliana mifanatrika amin’ireo mpampianatra sy mpianatra tao amin’ny EPP Faly aho hoy izy fa toerana nahalehibe ahy teto ka mampitamberina zavatra maro ho ahy. 35 taona lasa izay hoy izy no nianarako tato, tamin’izany aho dia kilasy T5 ary efa nanana andraikitra voalohany chef de classe, izay nijery ireo ankizy maditra, nitabatabata. Hafatra ho anareo ankizy no ampitaiko : Aminareo ireo dia hisy ho lasa dokotera, pilote, mpanabe fa ny faniriako dia ho lasa mpisolovava satria izay no tena asako. Matoa tonga amin’izao lalana izao isika dia nanana mpampianatra namolavola, mahalala mamerina valimbabena amin’ny mpampianatra isika. Satria reny mpiahy ny tenako dia vonona aho hanampy anareo .Izaho dia tsy hanao kobaka am-bava fa miteny amiko izay ilaina ianareo dia manome aho.Ny faniriako dia mba hipaka any amin’ny mpianatra ny fanampiana. Mahonena ny mahita ny ankizy tsy mihinan-kanina mandeha mianatra ka noho izany dia aleo ireo ankizy ireo no jereko ka manome vola roa tapitra ariary ho an’ny ankizy aho. Efa mandiva hanomboka ny fanadinana indrindra ho an’ny ankizy kilasy T5 ka noho izany dia mianara mafy isika mba ho tafita satria ny diplaoma voalohany no atrehinareo.